Ojiji na ụdị Gears Dị ka Axle ma ọ bụ Ọnọdụ Shaft - onye nrụpụta nnyefe ike Singapore pte ltd
Dabere na ebumnuche ya, enwere ụdị gia dị iche iche arụpụtara dị ka nha, akụ, ihe na ihe ndị ọzọ, haziri niile dị n'ahịa. Dabere na nhazi nke axle ma ọ bụ ogwe osisi PTO, ejiri kewaa ụdị gia ọ bụla, enwere njirisi dị iche iche usoro ewu ewu na -ekewa ha. Ụdị nhazi osisi 3 dị, ya bụ ogwe ndị yiri ibe ha, axis na-abụghị ibe ya, na ndị na-enweghị njikọ ma ọ bụ ihe na-agagharị agagharị.
Nke mbụ, n'otu ọkwa elu, ogwe osisi yiri ibe ha bụ ụdị gia na -agagharị. Iji nyefee ike ntụgharị ntụgharị n'etiti ogwe ndị yiri ibe ha, ha na -arụ ọrụ dị ka usoro. Ezubere maka ịrụ ọrụ ogologo oge, uru dị na ngwa ndị a na-enye ike kacha elu. Ọzọkwa mgbe ọ na -arụ ọrụ, ọ naghị eme nnukwu mkpọtụ ma nwee ike ibu nnukwu ibu. Mmepụta ụdị gia ndị a N'aka nke ọzọ na -emepụta mkpali axial ma dịkwa ọnụ. Site na nnyefe akwụkwọ ntuziaka dị ka ụgbọ ala na elekere, a na -eji ngwa ndị a maka igwe n'ozuzu ya.
Nke abụọ, iji nye ohere nnyefe ngagharị na ike dị larịị n'etiti anyụike nke nwere akụkụ ka ọ dabere na ibe ya, a na -ahazi ihe na -agagharị agịga sitere na ndị na -eweta PTO. Ịdaba na ụdị a, ndị na -esonụ bụ ụdị gia nke na -ekpu okpu, coniflex, bevel na angular. Na -achọ ike na ọsọ, ebumnuche ha bụ ịgbanye igwe n'ihi na ọ nwere ike ijikwa oke ibu. Gears ndị na -agagharị agagharị dị ọnụ ala karịa ma e jiri ya tụnyere ogwe yiri ya. A na -ejikarị ụdị gia ndị a eme ihe maka ike mmiri, locomotives, mgbatị aka, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-eji gia nwere anyụike na-anaghị agbagha agbatị, nke a na-eji na ngwa, ihe na-anọghị ma ọ bụ nke na-anaghị agbagha agbatị bụ nke chọrọ mbelata oke oke na-enye nnyefe ike n'ime mpaghara nwere oke. N'ihi na ọnụ ahịa nrụpụta ya bụkwa nke kacha ala, ọ nwere ikike ibu nwere oke ọ bụ ezie na ọ bụ ụdị akụrụngwa dị ọnụ ala karịa n'aka onye nrụpụta ogwe osisi PTO. Site n'ibelata oke iji nwekwuo arụmọrụ, enwere ike idozi ndọghachi azụ a n'ụzọ dị mfe.
Na -ahazi ojiji nke gears, nke a bụ naanị otu n'ime ọtụtụ sistemụ. A na -ahazi gears dabere na dayameta nke ihe eji arụpụta nkenke, rụpụta gia, ọnụ ọgụgụ nhazi ụlọ na nzọụkwụ n'etiti ndị ọzọ.